Global Voices teny Malagasy · Septambra 2010
Pejy 3 amin_ny 9
Tantara tamin'ny Septambra, 2010
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Septambra 2010
Tamin'ny 14 Septambra 2010, nankalaza ny faha 45 taonan'ny vaninandro nahaterahany ny filoham-pirenena rosiana. Ity no tsingerintaonany fahatelo nankalazaina nandritra ny naha-filoham-pirenena azy. Tamin'ny taona 2010, nitobaka ny firariantsoa sy ny fiarahabana avy amin'izao tontolo izao, ary anjatony amin'izy ireny no tsy avy amin'ny antso an-tariby ihany fa avy amin'ny...
Azia Afovoany sy Kaokazy22 Septambra 2010
Tonga ihany izy ity nony farany. Bloqosfer 2010, hetsika iray efa nandrasan'ireo mpitoraka blaogy maro any Azerbaijan efa ho roa volana eo ho eo, dia natao tamin'ny 10-12 Septambra tany amin'ny tanàna amorontsirak'i Nabran. Maherin'ny 100 ireo mpitoraka bilaogy efa manana traikefa naka toerana teo anilan'ireo vao nisondrotra, manampahaizana manokana...
Azia Afovoany sy Kaokazy21 Septambra 2010
Nanomboka tamin'ny Sabotsy 18 Septambra tamin'ny 7 ora maraina ny fifidianan'ny Wolesi Jirga ao Afghanistan.
Mozambika21 Septambra 2010
Brezila: fanokanana ilay Graffiti lehibe indrindra eran-tany
Amerika Latina21 Septambra 2010
Nanokana ny grafitti lehibe indrindra eran-tany izay mihoatra ny 37 000 sqaure feet any amin'ny faritr'i Foz do Iguaçu ny Filohan'i Brezila Lula da Silva. Ity faritany ity; malaza amin'ilay riandranon'i Iguaçu sy ny sisintany telo iraisan'i Paraguay, Brezila sy Arzantina, dia hody amin'ireo lalambe migodàna voaravaka manome lanja ny...
USA sy Ghanà: Izay mainty fihodirana to-teny indrindra eo anivon'ny serasera “Twitter”
Tselatra · Afrika Mainty21 Septambra 2010
Ny mpiblaogy Abena dia manolotra rohy mitondra any amin'ny lisitr'ireo “mainty fihodirana 100 izay to-teny indrindra eo anivon'ny serasera “Twitter”“. Somary kivy anefa izy raha nahita fa toa anarana faheno amin'ny tontolon'ny fampisehoana avokoa ny ankamaroan'ireo voatonona ao. Are black men with the most impact on the planet likely to...
Azia Atsinanana21 Septambra 2010
Karaiba: Veloma i Arrow
Karaiba21 Septambra 2010
Misaona ny fahalasanan'ny iray amin'ireo rain'ny mozika soca any amin'ny faritra - Alphonsus Cassell, fantatra kokoa amin'ny anarana "Arrow", ireo mpitoraka blaogy any Karaiba - ny hirany hoe Hot, Hot, Hot dia be mpitia tokoa ary nitondra nankamin'ny fitiavan'izao tontolo izao ny soca....